လင်မယားချင်းစကားများရန်ဖြစ်ရာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဗိုက်ကို ခြေထောက်ဖြင့်ကန်ကာ ရိုက်နှက်သောကြောင့်ခင်ပွန်းကို ဇနီးကဓားဖြင့်ခုတ်သတ် – Lat Khat Than
Lat Khat Than
လင်မယားချင်းစကားများရန်ဖြစ်ရာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဗိုက်ကို ခြေထောက်ဖြင့်ကန်ကာ ရိုက်နှက်သောကြောင့်ခင်ပွန်းကို ဇနီးကဓားဖြင့်ခုတ်သတ်
March 14, 2018 March 14, 2018 LatKhat Than90Comments
လင်မယားချင်းစကား များရန်ဖြစ်ရာမှ ခုနစ်လခန့်ရှိ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဗိုက်ကို ခြေ ထောက်ဖြင့်ကန်ကာ ရိုက်နှက် သည့်ခင်ပွန်းကို ကိုယ်ဝန်ဆောင် ဇနီးကဓားဖြင့်ခုတ်သတ်မှု ဖြစ် ပွားခဲ့ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ် ဖွဲ့က သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး ကန့်ဘလူမြို့နယ် ချောင်းကန် ကျေးရွာနေ (၃၂) နှစ်အရွယ်မြင့် ဇော်သည် မတ်လ ၁၁ ရက်မွန်း တည့် ၁၂ နာရီက ၎င်းအလုပ် လုပ်ကိုင်သည် နှီးစခန်းတွင် ဇနီးနှင့် စကားများရာမှ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ရဲမှတ်တမ်းတွင်ဖော်ပြထားသည်။
လင်မယားစကားများစဉ် ကိုယ်ဝန်ခုနစ်လ လွယ်ထားရ သည့် ဇနီးသည်၏ဗိုက်ကို ခြေ ထောက်ဖြင့်ကန်ခဲ့သည့်အပြင် ၀ါးရင်းတုတ်ဖြင့် ထပ်မံရိုက်နှက် သဖြင့် ဇနီးသည်က လက်ထဲတွင် အသင့်ရှိနေသည့် နှီးထိုးဓားဖြင့် ခုတ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
ဇနီးသည်က နှီးထိုးဓားဖြင့် ခုတ်သောကြောင့် ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့သည့် မြင့်ဇော်ကို ကန့်ဘလူ မြို့နယ် ခုတင် ၁၀၀ ဆေးရုံသို့ တင်းပို့ကုသစဉ် ယင်းနေ့ ည၈ နာရီတွင် ရရှိခဲ့သောဒဏ်ရာများဖြင့် သေဆုံးခဲ့သည်။
လင်းမယားချင်းစကားများ ရန်ဖြစ်ရာမှ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို နှီးထိုးဓားဖြင့်ခုတ်ခဲ့သည့် (၃၃)နှစ် အရွယ်မခင်ချိုချိုလင်း(ခ)ချိုလင်း ကို သက်ဆိုင်ရာနယ်မြေရဲစခန်း က လူသတ်မှုပုဒ်မ ၃၀၂ ဖြင့် အမှု ဖွင့် အရေးယူထားသည်။
Ref :7Day News Journal
← ကုလ ရဲ့ အစီရင်ခံစာနှစ်ရပ်ဟာကြောင်းကျိုးကင်းမဲ့တဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေဖြစ်ကြောင်း မြန်မာအစိုးရ ငြင်းဆိုကာ ပယ်ချ
TNLA မှ ရှမ်းလက်နက်ကိုင် RCSS စခန်းနှင့် တပ်သားများအား သိမ်းပိုက် သတ်ဖြတ်မှုအပေါ် ဂုဏ်ယူ ဖော်ပြ →
အိမ်အကူအမျိုးသမီးဒေါ်ကရင်မ သေဆုံးမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဥပဒေအရာရှိဟောင်း အမျိုးသမီးကို လူသတ်မှုပုဒ်မ၃၀၂ (၂)ဖြင့် စွဲချက်တင်
ကွမ်းစားများလို့ ခဏခဏကျောက်ကပ် ဆေးနေရတဲ့ ဝေဒနာရှင်များ ကျောက်ကပ်လဲရမည့်သူများအတွက် ကတက်ခေါက်
ရုရှားဒုံးသစ်၏ ပစ်လွှတ်နိုင်သော အကွာအဝေးသည် အမေရိကန်နှင့် သဘောတူညီထားသည့် တာလတ်ပစ် နျူလက်နက်ဖျက်သိမ်းရေး စာချုပ်ကခွင့်ပြုသည့် ပမာဏအတွင်းဖြစ်ကြောင်း မော်စကိုက ပြောကြား
အဆင့်ဆင့် တိုးတက်ြေ်ပာင်း်လဲလာသော မြန်မာ့ ရေတပ်ဖရီးဂိတ်များ
မြန်မာ့ တပ်မတော် လေ ၏ (A -5 Fighter Bomber) များနေရာ တွင် အစားထိုးရန် (Su -25SM)
သမ္မတထရမ့်ရဲ့ လိင်ြေ်ပာင်းများ စစ်မှုထမ်းခြင်းတားမြစ်မည့် မူဝါဒ အမေရိကန် တရားရုံးချုပ်က ခွင့်ပြု
အစ္စရေးက နိုင်ငံ၏ အဆင့်မြင့်ဒုံးကျည်ကာကွယ်ရေး စနစ်တစ်ခု ကို အောင်ြ်မင်စွာ စမ်း်သပ်
Lat Khat Than is your Latest news, Entertainment, Sport, Health, Celebrities, website. We provide you with the latest news and videos straight from the entertainment industry.
Articles are displayed in text, video and photo. Visitors can read news in articles type of categories in http://latkhatthan.com (example – News, Entertainment, Sport, Health, Celebrities, Media &amp; Music….etc).
Welcome To Lat Khat Than
Copyright © 2019 Lat Khat Than. All rights reserved.